Vary misy ronono soja - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Tiako bebe kokoa ny Ronono soja!, ny rafozako efa ela no naka azy ary tena tian'ny zanako vavy izany.
Salama kokoa izy io, manana antsasaky ny sabon'ny rononon'omby manontolo, izay mety amin'ny sakafo ary manampy antsika hifehezana ny kolesterola. Nametraka rohy mampiavaka azy aho raha liana ianao: Ronono soja.
olona tsy mahazaka laktazy ary ny vegan Izy ireo dia mihinana an'io ronono io izay manana be vitamina betsaka.
El paiso vary Izy io dia iray amin'ireo tsindrin-tsakafo tena tiako indrindra ary noheveriko fa amin'ny ronono soja dia tsy dia ho tsara izany. Diso aho! Matsiro. Ny fitsapana asidra dia rehefa nanandrana ny rafozam-baviko, dia ny tsindrin-tsakafo ankafiziny indrindra ary rehefa nolazaiko azy fa vita tamin'ny ronono soja aho dia tsy dia tsara loatra izy. Raha vao nanandrana izany izy dia nanova ny sainy ary nahafantatra izany manankarena be io.
ny voaloboka ataon'izy ireo tsara kokoa ny tsirony, saingy tsy voatery izy ireo. Ny marina dia tiako be izy ireo, saingy tsy ilaina ny manipy azy ireo.
1 Vary misy ronono soja
Fomba fahandro mahazatra vita amin'ny ronono soja.
Fotoana hiketrehana: 37M
Fotoana manontolo: 37M
180 g ny vary
Ronono soja 1000 g
Hazo kanelina 2
ny voasarin'ny voasarimakirana (sombina kely fotsiny no raisiko, tsy misy hoditra fotsy)
Voaloboka 20 g (tsy voatery)
Apetratsika amin'ny lolo ny lolo ary ampio ny vary, ny ronono, ny hazo kanelina ary ny voasarimakirana.
Izahay dia manao fandaharana 35 minitra, mari-pana 90º ary hafainganam-pandeha 1.
Ampianay ny siramamy sy ny programa 2 minitra, mari-pana 90º ary hafainganam-pandeha 1.
Esory ny lolo amin'ny lelany, ny hoditry ny voasarimakirana ary ny kanelina.
Zarainay ny vilia baolina ary avela mangatsiaka.
Apetrakay ao anaty vata fampangatsiahana izy ireo ary avela hihena mandritra ny adiny telo farafahakeliny.
Aroso miaraka amin'ny voaloham-boaloboka eo amboniny ary hafafazo amin'ny kanelina an-tany.
Fanazavana fanampiny -Pofom-bary
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Postres
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Vary misy ronono soja
Juanfra dia hoy izy:
Tiako ny nametrahanao an'ity recette ity ... manana zanak'olo-mpiray tam-po amiko aho, ary nanao azy indraindray, ary ny marina dia matsiro, betsaka lavitra noho izay noeritreretiko ... mihinana ronono ombivavy tsy mihena aho , ary soja be dia be, noho izany dia namporisika ahy ianao hanao izany amin'ny fanoloana ireo akora ireo. Misaotra anao.
Valio i Juanfra
Manantena aho fa tianao izany, Juanfra! Holazainao amiko izany. Oroka.
Akory ny hagagana azoko tamin'ity maraina ity tamin'ity recette ity!
Jereo Elena, efa nijanona tsy nety nandritra ny taona vitsivitsy aho, ary mahafinaritra ahy tokoa ity fomba fahandro ity. Fanontaniana iray, azoko soloina siramamy ho an'ny zava-mamy? Fantatrao ve, sakafo, ary ohatrinona?
Salama Maria, faly aho fa tianao ity fomba fahandro ity. Eny, azonao atao ny manolo siramamy ho an'ny sweetener ary raha ny habetsany, jereo ireo fitoviana tonga ao anaty boaty mamy. Mirary ny soa indrindra.
Eny, nanandrana naka azy aho saingy nanandrana marika maromaro ary tsy tiako ny iray ... Manome toro-hevitra manokana ve ianao ??? Misaotra!
Tianay ny fofom-bary ao an-trano.
Piluka, zavatra mitovy amiko no nanjo ahy, tsy dia nifanentana tamiko ilay tsiro fa tato ho ato dia nanandrana ny marika Danone aho ary afangaroiko amin'ny ronono ombiko mahazatra izany, ary tena tiako mandritra ny roa herinandro, hisotro azy aho tsy afangaro. Tena tsara ho an'ny kolesterola misy ahy izany.
Silviar dia hoy izy:
Tsy tiako koa ny ronono soja, misotro vary organika sy zava-pisotro soja avy any Aldi aho izao, izay tena matsiro, raha ny tena tiako aza
Mamaly an'i Silviar
Salama Piluka, tiako ny «Vivesoy» nataon'i Pascual. Manantena aho fa tianao ity vary ity, hoy ianao amiko. Mirary ny soa indrindra.
Lolina dia hoy izy:
Tiako ny nametrahanao an'ity recette ity!
Manana fomba fahandro amin'ny ronono soja ve ianao? Tsy tiako ilay manana be ahy.
Valiny tamin'i Lolina
Salama Lolina, faly aho fa tianao izany. Ny marina dia tsy manana ny fomba fanamboarana ronono soja aho, fa hiezaka ny hahita azy aho. Mirary ny soa indrindra.
CAYETANO CACHO dia hoy izy:
Ny ronono nendasina izay nataonay dia nivadika ho lehibe ary ny zavatra tsara dia kely ny vola azo avy aminy.
Ny zavatra tadiavinay ihany koa dia ny lasopy vary izay tsara tarehy
Valio amin'i CAYETANO CACHO
Faly aho fa tianao izany, Cayetano!. Mirary ny soa indrindra.
Matetika aho no manao azy amin'ny ronono soja sy ny volontsôkôlà, mahafinaritra izy ary vitsy ny kaloria ao aminy, Meksikana aho ary any Mexico dia mahazatra ny mametraka voaloboka na voanio ary mahafinaritra be izany ankoatry ny kanelina, mazava ho azy, safidy hafa ny mihinana azy, ary koa ny siramamy nosoloiko ho an'ny fructose ary tsara izany fa ny marina dia tsara kokoa amin'ny siramamy.
Raha te-hanaingo azy ianao dia mametraka ronono ronono mety indrindra ary esoriko ny rononon'omby mitovy.
Tsara tokoa, Carmen!. Andramako izany, azo antoka fa matsiro. Miarahaba ary faly be aho mahita anao lavitra be!
Hataoko anio hariva, rahampitso dia tokony ho tsara izany, sa tsy izany? Rahampitso manana vahiny aho, amin'ireo isa ireo dia mivoaka ho an'ny olona 4 ??.
Fanontaniana iray hafa koa, amin'ny zoma dia mila manamboatra mofomamy ho an'ny sekolin'ny zanako lahy aho, misy zaza 27, inona ny mofomamy azoko atao? Nieritreritra ny hanao mofomamy zana-kazo na antitra aho. Misaotra betsaka ary mihaona amin'ny manaraka. Ho ela velona anie ny thermomix!
Salama Marga, manantena aho fa tianao izany. Rahampitso dia ho tonga lafatra ary ho an'ny olona 4-5 ny fomba fahandro. Mikasika ny mofomamy spaonjy, ho an'ny ankizy dia tiako ny manana olitra, ilay manana Cola-Cao sy ny voasary. Azo antoka fa ho tianao ny iray amin'izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Ny tena tiako indrindra dia ny Provamel avy any Santiveri, saingy misy marika vitsivitsy misy kasika lavanila izay tena tsara koa !!!
Tsy mbola nanandrana an'ity aho! Ny ampitso nividianako azy dia naka an'i Vivesoy de Pascual foana aho. Misaotra betsaka, Juanfra!
Nataoko tamin'ny voasarimakirana sy mangidy be ny vary
Salama Juan, ny voasarimakirana voasarimakirana dia tsy maintsy mandeha tsy misy faritra fotsy. Azonao atao ny manampy ny habetsaky ny hoditra na ny voasarimakirana voasary. Mirary ny soa indrindra. (Namboariko tamin'ny resipeo, izay amina sombiny iray dia ampy, misaotra betsaka!)
Fantastic, miaraka amin'ny Torrijas, ny ronono nendasina, ny Quince Croquettes ary izao ity Rice miaraka amin'ny ronono soja ity, mahomby amin'ny karazana fomba fahandro aho. Mihabetsaka, misimisy kokoa, ny fa hahaha.
Tena faly aho, Jorge!
Tiako izy nandritra ny taona maro nisotro ronono soja ary ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo koa aho ary tsara ho ahy ity vary kely ity, alaiko avy any Asturiana
oroka ary resipeza tena tsara
Misaotra betsaka, Mercedes! Manantena aho fa tianao izany. Oroka.
Okay. Misaotra anao indrindra. Hiezaka ny hanao izany aho
Salama, fanontaniana iray, azoko atao ve ny manao an'ity recette ity fa tsy ronono soja kosa no asiana ronono semi-skim? amin'ity tranga ity, mitovy ve ny habeny, 1 litatra?
misaotra nanome anay recette be dia be ..
Nahita ilay tao anaty vilanibe aho ary tena tsara izany, mipetraka ao amin'ny Mar Menor aho, ary mbola tsy nahavita azy mihitsy, fa ny rafozambaviko manao azy miaraka amin'ny HT ary mivoaka mamy tokoa. Miarahaba anao !! Oroka
Salama Rosa, raha hampiasa ronono semi-skimmed ianao dia tsara kokoa ny manao ny fomba "RICE MISY MILK". Napetrako ny rohy: http://www.thermorecetas.com/2010/03/29/Receta-Thermomix-Arroz-con-leche/
Ity fomba fahandro ity dia amin'ny ronono iray manontolo fa amin'ny ronono vita amin'ny antsasaky ny hoditra dia mandeha tsara ihany koa izy. Lazao amiko hoe ahoana.
Andramo ny vilanin'ny Murcian, ho hitanao fa matsiro. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra betsakassssssssss !!!! Efa ela aho no nanao ny resinao, ary mahafinaritra daholo izy ireo. Tsy zakan'ny lactose aho nandritra ny dimy taona, ary na dia manao puding-bary amin'ny ronono tsy misy lactose aza aho dia kely ihany no azoko atao. Izao dia hanonitra izany aho. Tsy sahy nanandrana azy tamin'ny ronono soja aho. Tsy manana marika ronono soja manokana aho, miovaova aho. Ilay tiako indrindra dia Savia avy any Danone, Calcimel avy any Provamel koa tena tsara, saingy tiako ny miovaova, any Lidl dia mivarotra ihany koa izy ireo, resaka tsiro io. Mieritreritra aho fa mila manandrana ny Aldi fotsiny aho. Mba hanaovana ny tsara indrindra amin'ny yoghurt dia i Calcimel. Oroka maro avy any Figueres. Maite.
Misaotra betsaka anao nahita anay, Maite! ary faly be aho fa tianao ity fomba fahandro ity. Oroka.
Salama, nanao ny fomba fahandro tamin'ny Alahady aho ary nanararaotra ny fetin'ny Reny fa nomeko ny androko… fahombiazana !! Na ny zanako lahy izay matetika tsy manandrana zavatra maro dia tiany !! MISAOTRA
Faly be aho, Rosa!. Ny tena marina dia manankarena be ary maivana kokoa. Mirary ny soa indrindra.
Nora dia hoy izy:
Salama! Manana fanontaniana aho… raha manao ny antsasaky ny akora ao anatiny aho, mila mijanona miaraka amin'izay ve aho? Sa mila ahena izany?
Valiny tamin'i Nora
Pasta miaraka amin'ny broccoli sy voatabia maina